Watch OS kuma sii hayn doono garaaca wadnaha 10m kasta haddii aad guurto | Wararka IPhone
Watch OS 1.0.1 wuxuu isku dayi doonaa inuu keydiyahaaga keydiyo 10m kasta, laakiin ma sameyn doono haddii cududdu dhaqaaqdo
Markay Apple Watch isticmaashay nooca 1.0 ee Watch OS waxay ilaalinaysay garaaca dadka isticmaala 10kii daqiiqaba. Tan iyo markii la sii daayay Watch OS 1.0.1, isticmaaleyaashu waxay ogaadeen in xogta aan mar dambe si joogto ah loo keydin, mararka qaarkood waxay noqon doontaa iyada oo aan la diiwaangelin cabbiraad muddo saacad ku dhow, taas oo tan iyo bilowgii loo maleynayay inay tahay cilad ku jirta nooca ugu dambeeyay ee nidaamka hawlgalka Apple Watch.
Sida laga soo xigtay bogga la cusbooneysiiyay ku saabsan cabirka garaaca wadnaheena, "Apple Watch wuxuu isku dayi doonaa inuu cabbiro garaaca wadnahaaga 10-kii daqiiqaba, laakiin ma duubi doono marka aad dhaqaaqayso ama aad dhaqaajineyso gacantaada”. Nooca asalka ah ee Watch OS ayaan tixgelin siin nooc kasta oo dhaqdhaqaaq ah iyo xaqiiqda ah inaan la badbaadinaynin garaaca wadnaha sidii hore waxay sababtay cabashooyin badan oo adeegsadayaasha ah. Dareenka guud ayaa ah in qalabku lumiyay shaqadii cusbooneysiinta.
Lama oga sababta ay Apple u soo bandhigtay isbadalkan dabeecadeed ee smartwatch-ka ah, isbadal umuuqda mid kudhaqaaq ah halkii uu ka noqon lahaa isbedelka nidaamka xakameynaya garaaca wadnaheena. Waxaa jira dad sidaas u fikiraya isbedelkan ayaa loo sameeyay si loo yareeyo isticmaalka batteriga, laakiin bayaankani ma noqonin qof jeclaaday, maxaa yeelay cidina ma dareemin cunno xad-dhaaf ah markii si joogto ah loo cabiray 10-kii daqiiqaba.
Xalka ay bulshadu u heshay dhibaatada waa in la bilaabo tababar lagu qasbayo cabirka garaaca wadnaha, kaas oo badbaadin doona wadnaheena 10-kii ilbiriqsi kasta. Dhibaatada ugu weyni waxay tahay in isticmaaleyaashu ay xusuustaan ​​inay gacanta ku dhaqaajiyaan qaabkan markii, haddii nidaamka caadiga ah sidii hore u shaqeeyey, uma baahnin inaan wax uun u qabanno. Dhinaca kale, isticmaalka ay tahay inay isku dayaan inay yareeyaan ayaa saameyn badan ku yeelan doona iyadoo la cabbiro garaaca wadnaheena 10-kii ilbiriqsiba marka loo eego 10-kii daqiiqaba, si macquul ah.
Aragtidayda, Apple waa inuu kudarsadaa ikhtiyaar Watch OS si dadka isticmaala ay go'aan uga gaari karaan hadii keystrokes-ka la keydiyo daqiiqado kasta oo X ah iyo inkale, sidoo kale tilmaam inta jeer ee ay tahay inay cabirto. Waxay na siin laheyd xoogaa shaqo ah, laakiin marwalba waad heysan kartaa sidii ay ahaan jirtay Watch OS 1.0 ugu talagal ahaan, hadii aan aragnay inuu batteriga cunaayo si ka dhaqso badan sida aan jeclaan laheyn, waan ku saxi karnaa sida aan doono.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Alaabada Apple » Apple Watch » Watch OS 1.0.1 wuxuu isku dayi doonaa inuu keydiyahaaga keydiyo 10m kasta, laakiin ma sameyn doono haddii cududdu dhaqaaqdo
Taasi waa sababta aan u jeclahay Fitbit HR
Aan aragno haddii aan fahmay, haddii aad dhaqaajiso cududdaada kuma cabirmayo maxaa yeelay waa wax aan caadi ahayn, laakiin haddii aad ordo waxay kaa dhigeysaa cabbir isdaba-joog ah ...? Kaliya Apple ayaa awood u leh inay ka dhigto kuwa raacsan inay aaminaan sharraxaaddeeda
Ku jawaab Rober
Galab wanaagsan, Rober. Xaqiiqdii sidaas maahan. Wax walbo sida ay tahay waxa Apple yiraahdo iyo sidaan u fahmay, Apple Watch wuxuu qiyaasi doonaa garaaca wadnahaaga 10m kasta hadii aad nasato. Micnahoodu ma aha inuusan cabbiri karin haddii uu dhaqdhaqaaq jiro, laakiin inuusan si otomaatig ah u cabbiri doonin sidii hore. Sida aan ugu sharraxayo maqaalka, tani aniga iguma muuqato mid sax ah oo waxaan u maleynayaa inay ku saxi doonaan nuqulada mustaqbalka.
Mooverang, oo ah barnaamij lagu kaydiyo laguna xakameeyo kharashaadkaaga iPhone-ka
Ciyaaraha ugu fiican iPhone [31/5/2015]